Vaovao - Inona no karazana fiasa ananan'ny milina mpanety metaly?
Inona no karazana fiasan'ny milina mpanety metaly?
Ny milina mpanety metalymanana fampiharana isan-karazany, fahombiazana ambony amin'ny asa, fandidiana tsotra, ary fikojakojana mety. Ny mpampiantrano dia azo apetraka ao an-trano na any ivelany. Ny milina mpanety metaly dia vita amin'ny fomba siantifika. Ny zavatra voalohany dia ny maotera dia fehezin'ny controller programmable araka ny filantsika. Ny tsindry, ny hafainganam-pandeha ary ny kapoka noforonin'izy io dia azo ifotorana avokoaNy teknolojia mila ahitsy, ary ny fameperana sy ny asa hafa dia ho vita tsara.
Ny milina mpanety metalydia manana ny fiasan'ny milina roa ho iray, izay afaka manindry (vy potika, varahina hosoka, aliminioma fako, vy tsy misy pentina, potika fiara, sns) ho fonosana amin'ny endrika isan-karazany sy ny fepetra arahana toy ny cuboid, octagon, ary cylinder. . Ny sakana avy eo dia tapahina ho fitaovana efa voaomana mialoha. Ity andiam-panety metaly ity dia ampiasaina indrindra amin'ny fikosoham-bary, ny fanodinana metaly sy ny indostrian'ny fanodinana, ny indostrian'ny famokarana ary ny indostrian'ny fandrendrehana.
Rehefa manety ny tapany mihodinkodina, ny lelany manety dia tokony hivezivezy miaraka amin'ny tapa-mihetsiketsika, izany hoe, ny lelan'ny mpanety dia tokony hamita ny fanapahana sy ny fihetsehana miaraka, ary ny sub-hafainganam-pandeha eo noho eo amin'ny lelan'ny mpanety amin'ny lalana mihetsiketsika dia tokony hitovy amin'ny an'ny. ny tapany mihodinkodina. Ny hafainganam-pandehan'ny hetsika vo dia mitovy na mihoatra ny 2%~~3%, izany hoe, v=(1~1.03)v0. Rehefa manety ny tapany nanakodia, raha ambany noho ny hafainganam-pandeha v0 amin'ny tapa-kodiarana ny hafainganam-pandeha eo noho eo amin'ny lelan'ny mpanety eo amin'ny lalana mihetsika amin'ny tapany voakodia, dia hisakana ny fihetsehan'ny tapa-kodiarana ny sisiny, izay mety hiteraka ny tapany nanakodia mba hiforitra, ary na dia mahatonga ny horonana sombintsombin'ny manodidina ny loza antsy. . Mifanohitra amin'izany kosa, raha lehibe lavitra noho ny hafainganam-pandehan'ny tapa-kodiarana v0 ny hafainganam-pandeha eo noho eo amin'ny lelan-tsipìka amin'ny lalan'ny fihetsehan'ny tapatapaka voakodia mandritra ny fanetezana, dia hisy fiatraikany mihenjana kokoa ao amin'ilay tapa-kodiarana, izay hisy fiantraikany amin'ny ny kalitaon'ny gorodona. Ary hampitombo ny fiantraikan'ny milina mpanety.
Araka ny karazana vokatra isan-karazany sy ny fepetra arahana ary ny fepetra takian'ny mpampiasa, ny milina fanetezana metaly mitovy dia tokony ho afaka manapaka fepetra maromaro amin'ny halavany, ary manao ny fandeferana ny haben'ny halavany sy ny kalitaon'ny fizarana voapaika mifanaraka amin'ny fitsipika mifandraika amin'izany;) Afaka mahafeno ny fikosoham-bary na ny fepetra takian'ny vokatra.
Baler baoritra vita an-trano, Aluminum Foil Baler Machine, Y81 Hydraulic Baler, Scrap Metal Compactor, Fitaovana Pop-Top Can Baler, Leaf Compactor sy Baler,